Wasiirada Soomaaliya oo heshiiskii maamulka Koonfur Galbeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Golaha wasiirrada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay heshiiskii 23-kii bishaan June ay Muqdisho ku gaareen siyaasiyiin ku muransanaa qaabka maamul loogu dhisayo gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Golaha wasiirrada oo xalay ka dhacay Muqdisho, uuna shir guddoominayey Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed, waxaana looga hadlay heshiiskii Muqdisho lagu kala saxiixday ee lagu mideeyey dhinacyadii isku hayey maamul u sameynta Lixda iyo seddexda gobolka ee Koonfur galbeed Soomaaliya.
Golaha wasiirrada ayaa ayiday heshiiskaasi, waxaana la isku raacay in la dhiso guddi farsamo oo dadajiya dhisidda maamulka seddexda gobo lee Shabeellada Hoose, Baay iyo Bakool.
Shirka Golaha Wasiirrada markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta faah-faahin ka siiyey Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Khaalid Cumar Cali, waxa uu sheegay in Xukuumadda ay ayidday heshiiskii Muqdisho lagu gaaray ee lagu taageeray dhisidda maamulka KMG ah ee saddexda gobo lee Koonfur galbeed Soomaaliya, kaas oo uu sheegay in uu ka turjumayey Midnimada shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Wasiir Khaalid Cumar Cali, ayaa yiri “Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxey ka shaqeyneysaa sidii si cadaalad ah ay wax ugu wada qeybsan lahaayeen dhammaan dadka Soomaaliyeed ee degan saddexda gobol, waxa uu intaa sii raaciyey in u jeedadu tahay sidii loo gaari lahaa hammi dib u heshiinneed oo wadajir ah.
Wasiir Khaalid ayaa tilmaamay in lagama-maarmaan ay tahay in loo hoggaansamo heshiiskii dhinacyadii is hayey lagu xaliyey ee Muqdishio ka dhacay 23-kii Bishan June, “Waxaan ugu baaqayaa in Ummadda Soomaaliyeed ay u midoobaan sidii ay u wadaagi lahaayeen kheyraadkan tirada badan ee dalkeenna uu leeyahay” ayuu intaasi sii raaciyey.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre oo ay wasaaradiisa hoostagaan maamul u sameynta gobollada ayaa shalay isagoo ku sugan Jabuuti sharci darro ku tilmaamy heshiiska ay Muqdisho ku gaareen dhinacyadii isku hayey Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wasiirka ayaa ku dooday in shaqada wasaaradiisa la farageliyey, islamarkaana maamuladii horay loo dhisay oo qeylo ka taagan tahay la dhisayo maamullo meelihii ay ka talin lahaayeen qeybo ka mid ah Alshabaab heystaan.